कृषि उपज भण्डारणको लागि सुखौरामा शितभण्डार निर्माण : किसान उत्साहित
चैत २३, बागलुङ । गतवर्ष राम्रो आलु फलाएका बरेङका किसानले बजार पाएनन् । घरायासी प्रयोजनबाहेक भण्डारण गरेको आलु आधा कुहियो, आधा उम्रियो र खान नमिल्ने भयोे । सिजनमा बजार मूल्य निकै कम हुने र बेसिजनमा विक्री गर्न आलु जोगाउनै किसानलाई कठीन छ ।
सुखौरा गाउँपालिकाले आलुको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरेको क्षेत्र हो । यहाँ फलेको आलु स्वादिलो भएकाले उपभोक्ताको रोजाइँमा पर्ने गरेको छ । शीतभण्डार निर्माण भएसँगै यहाँका किसानले उत्पादन गरेको आलु बाह्रैमहीना विक्रीका लागि तयार रहने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
गाउँपालिकाको पहल र गण्डकी प्रदेश सरकारको रू. १५ लाख लागतमा शितभण्डार निर्माण गरिएसँगै किसानमा आम्दानीको आशा पलाएको हो । ‘अब हामीले बेसिजनमा मूल्य पारेर आलु बेच्न सक्छौं’, स्थानीय किसान मोहन थापाले भने, ‘शीतभण्डारले किसानलाई साथ दिनेछ ।’ आफूहरुले उब्जाउ गरेको कृषि उपज सुरक्षित राख्न सकिने भन्दै थापाले खुशी व्यक्त गरे । शितभण्डार निर्माण भएसँगै आफूहरुले उत्पादन गरेको आलु समयमै बेच्न नसकेको खण्डमा कुहिएर जाने डर नरहेको बताए ।
उनले शीतभण्डारका कारण उत्पादित आलुलाई बेसिजनमा बेचेर दुई गुणा बढी फाइदा गर्न सकिने बताए । सुखौरा भित्रिवन आलु पकेट क्षेत्रमा शितभण्डार निर्माण भएको हो ।
यहाँका २२४ घरधुरीले फलाएको आलु शीतभण्डारमा राख्न सकिने छ । सुखौरामा हरेक परिवारले ६ देखि २२ मुरीसम्म आलु उत्पादन गर्ने गरेको तथ्यांक गाउँपालिकासँग छ । आलुको विक्रीबाट मात्रै रू. १० देखि २० लाख गाउँ भित्रिने गरेको छ । शीतभण्डार प्रयोगमा आएपछि यो अंक दोब्बर हुने किसान बताउँछन् ।
आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै त्यहाँका किसानले गहुँ र जौँ लगाउने जग्गामा समेत आलु नै लगाउन थालेका छन् । सरकारले आलु उत्पादनको लागि अनुदान दिन थालेसँगै किसानले आलु उत्पादनलाई वृद्धि गरेका छन् । सुखौरामा फलेको आलु गुल्मीको शान्तिपुर, रुपन्देहीको बुटवल, जिल्लाका साना बजार र गाउँमासमेत विक्री हुने गरेको छ । रासस